အရပ်ပုတဲ့ကောင်မလေးတွေရဲ့ အားသာချက်(၆)ချက် – Tameelay
အရပ်ပုလို့ အားငယ်စရာ မလုိုပါဘူး။ အရပ်ပုတဲ့ ကောင်မလေးတွေမှာလည်း သူ့အားသာချက်နဲ့သူရှိတတ်ကြပါတယ်။ အရပ်ပုတဲ့ ကောင်မလေးတွေရဲ့ အားသာချက်(၆)ချက်ကိုအောက်မှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
အရပ်ပုတော့ အ၀တ်အစား မရှားပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဈေးဝယ်ထွက်တဲ့ အခါမျိုးမှာ တော်ရုံကလေးအင်္ကျီကို ကောက်စွပ်ပြီး ၀တ်သွားလို့ရပါတယ်။ ဆိုင်မှာ သွားဝယ်ရင်လည်း အာရှမှာ နေပြီး အရပ်ပုတာ မဆန်းတဲ့အတွက် အင်္ကျီဆိုဒ်တွေက အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။
2. ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါတိုင်း ရှေ့ဆုံးမှာ နေရခြင်း
ဒါကတော့ ရှင်းပါတယ်။ အရပ်ပုတဲ့သူတွေဟာ ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာ ရှေ့ဆုံးကနေ နေဖို့ ဦးစားပေးခံရပါတယ်၊။ ဓာတ်ပုံထဲမှာ ရှေ့ဆုံးကထင်းကနဲ ဖြစ်နေတာပေါ့။
အရပ်ပုတော့ ဘာဖြစ်သလဲ။ သေချာတာကတော့ အပေါ်က တန်းတွေ၊ ဘားတွေနဲ့ ခေါင်းကို မတိုက်မိတော့ဘူးပေါ့
အရွယ်အစားကသေးတော့ နေရာအများကြီး မလိုဘူး။ ဒီတော့ အဆောင်တို့ ဘာတို့ငှားမယ်ဆိုရင် တော်ရုံတန်ရုံကျဉ်းလို့ နေမရတဲ့အခန်း ချောင်ချောင်လည်လည် နေလို့ရတယ်၊ ဒါက ၀င်ငွေကို သက်သာစေပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ သိပ်မငှားရတဲ့ အခန်းမျိုးဟာ ဈေးသက်သာတတ်လို့ပါ။
5. အမြဲတမ်းကလေးကဲ့သို့ နုပျိုနေခြင်း
အရပ်ပုတဲ့ လူတွေရဲ့ အားသာချက်က အိုမင်းတဲ့အထိ ခါးမကိုင်းတာပဲ-လို့ မှတ်သားဖူးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အရပ်ပုတော့ အသက်အရွယ်ကို ခန့်မှန်းရခက်ပြီး တစ်ခြားသူများထက် အရွယ်ပိုတင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရပ်ပုသူများဟာ ကလေးငယ်လေးတွေလို အရွယ်က နုပျိုနေလေ့ရှိပါတယ်။
အရပ်ရှည်တဲ့မိန်းကလေးများက သူတို့ရည်းစားထက် အရပ် အရမ်းရှည်သွားမှာ ဆိုးလို့ ဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာ
အရပ်ပုတဲ့ မိန်းကလေးတွေကတော့ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်ကို စိတ်ကြိုက်စီးနုိုင်ပါတယ်။
လူတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ “ရေသောက်ခြင်းဖြင့် ရရှိသော အကျိုးကျေးဇူးများ”
ရေသောက်ခြင်း ဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် လွန်စွာမှ အထောက်အကူပြုပါတယ်ရေသောက်ခြင်းဖြင့် ရနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများကို တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့ကစပြီး ရေများများသောက်လိုက် ကြရအောင်နော်၊ ကုန်ကျစရီတ်လည်းနည်းပြီး ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း အထောက်အကူ ပြုနိုင်တာမို့ လုံးဝကို အရေးပါတဲ့ရေပါပဲ… ရေသောက်ခြင်းဖြင့် မင်းရဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်တွေကို လျှော့ချပေးပါတယ်။ ရေတစ်ခုတည်းကိုသာ …
အမြင်ရဲ့လှည့်စားတတ်မှုကိုဖော်​ပြတဲ့ ပန်းချီ အနုပညာ
#မင်္ဂလာရှိပါစေ ဒီပန်းချီကားတွေကို သင်ဒီအတိုင်း သာမန်ကြည့်ရင် ညစ်ညမ်းပန်းချီတွေလို့ မြင်နေပါလိမ့်မယ်..။ ပန်းချီကားရဲ့ အကြောင်းမှန်ကို သိသွားရင်တော့ သင်မျက်ရည်ကျလောက်အောင် ရင်ထဲရောက်သွားပါလိမ့်မယ်..။ အကြောင်းအရင်းက ဒီလိုပါ…။ တိုရီကို အနုပညာပြတိုက် အဝင်ဝမှာ ချိတ်ဆွဲထားတဲ့ ဆေးရေးပန်းချီကားပါ။ အကြောင်းမသိသူတွေက အံသြလှောင်ပြောင်သရော်ကြတယ်။ သိသူတွေက မျက်ရည်ကျမိတယ်။ အကြောင်းမှာ…. အဖိုးအိုက တော်လှန်ရေးသမား …
ဒီ ဆေးနဲ့ကော်ဖီ လုံးဝလုံးဝ မတည့်ပါ
ဒီ ဆေးနဲ့ကော်ဖီ လုံးဝလုံးဝ မတည့်ပါ Poisinဖြစ်ပြီး အသက်အန္တရယ်ရှိသည် ဆိုးကျိုးရလာဒ် များများ လက်ဆင့်ကမ်းပြီး Share ပေးပါ ကော်ဖီ တွဲသောက်မိလို့ ဒီပုံထဲရှိအမျိုးသားမှာ သေဆုံးသွားရှာတယ် သူငယ်ချင်းတို့လည်း ဒီ ဆေးသောက်ပြီး ကော်ဖီမသောက်ကြပါနဲ့ ပြောပါရစေ မယုံကြည်ဘူးဆိုလည်း တွဲပြီး သောက်ကြည့်လိုက်ပါ …